သခင်ကြွလာခြင်း - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဘုရားသခင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ ဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2018-02 > သခင်ဘုရားကြွလာဒီ
ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နိုင်တဲ့အကြီးမားဆုံးအဖြစ်အပျက်ကဘာဖြစ်မယ်လို့ခင်ဗျားထင်သလဲ။ နောက်ထပ်ကမ္ဘာစစ်လား ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရောဂါအတွက်ကုသနည်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းလား။ တစ်ချိန်တည်းမှာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးလား ဂြိုဟ်တုထောက်လှမ်းရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရန် သန်းပေါင်းများစွာသောခရစ်ယာန်များအတွက်ဤမေးခွန်း၏အဖြေသည်ရိုးရိုးလေးဖြစ်သည်။ အကြီးကျယ်ဆုံးအဖြစ်အပျက်သည်ယေရှုခရစ်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ သမ္မာကျမ်းစာသမိုင်း တစ်ခုလုံးသည် ကယ်တင်ရှင်နှင့် ဘုရင်အဖြစ် ယေရှုခရစ်ကြွလာခြင်းကို အာရုံစိုက်သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမမိဘများသည် အပြစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးကို ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ဘုရားသခင်သည် ဤဝိညာဉ်ရေးဖောက်ပြန်မှုကို ကုစားရန် ရွေးနှုတ်ရှင်ကြွလာမည်ဟု ကြိုပြောထားသည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို အပြစ်ပြုရန် သွေးဆောင်သောမြွေအား ဘုရားသခင်က “သင်နှင့်မိန်းမနှင့် သင်၏အမျိုးအနွယ်နှင့် သူ၏အမျိုးအနွယ်ကို ငါရန်ငြိုးဖွဲ့စေမည်။ မင်း​ရဲ့​ဦး​ခေါင်း​ကို ကြိတ်​ပြီး မင်း​ခြေ​ဖနောင့်​ကို ကြိတ်​လိမ့်​မယ်။” (က 3,15) ဤသည်မှာ အပြစ်နှင့် သေခြင်းတရားသည် လူသားတို့အပေါ် လွှမ်းမိုးထားသည့် အပြစ်၏တန်ခိုးကို အနိုင်ယူနိုင်သော ကယ်တင်ရှင် သမ္မာကျမ်းစာ၏ အစောဆုံးပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်သည်။ "သူ မင်းရဲ့ခေါင်းကို ကြိတ်သင့်တယ်" ဒါက ဘယ်လိုဖြစ်သင့်လဲ။ ရွေးနှုတ်ရှင်ယေရှု၏ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း အသေခံခြင်းအားဖြင့် “သင်သည် သူ၏ဖနောင့်ကို ကိုက်လိမ့်မည်”။ သူသည် ပထမဆုံးကြွလာချိန်တွင် ဤပရောဖက်ပြုချက်ကို ပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်က သူ့ကို “ဤလောက၏အပြစ်ကိုဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်” အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ (ယောဟန်၊ 1,29) သမ္မာကျမ်းစာသည် ခရစ်တော်၏ပထမဆုံးကြွလာချိန်နှင့် ယခုယုံကြည်သူများ၏ဘဝထဲသို့ ယေရှုဝင်ရောက်ခြင်းတွင် ဘုရားသခင်၏ လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၏ဗဟိုချက်ကို ဖော်ပြသည်။ သခင်ယေရှုသည် သိသိသာသာကြီးနှင့် ကြီးစွာသောတန်ခိုးဖြင့် တစ်ဖန်ကြွလာမည်ဟုလည်း သူမက အသေအချာပြောပါသည်။ အမှန်မှာ၊ ယေရှုသည် နည်းလမ်းသုံးသွယ်ဖြင့် ကြွလာခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ လူသားအားလုံးသည် အပြစ်ပြုပြီး သေခြင်းတရားကို ဤကမ္ဘာသို့ ယူဆောင်လာသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ရွေးနှုတ်ခြင်း- ကိုယ်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်း- လိုအပ်ပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့နေရာ၌အသေခံခြင်းဖြင့် ဤကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်သည်။ ပေါလုက “အကြောင်းမူကား၊ ခပ်သိမ်းသော ပြည့်စုံခြင်းတို့သည် သူ့အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူသည်ကို ဘုရားသခင် နှစ်သက်တော်မူသဖြင့်၊ မြေကြီးပေါ်၌ဖြစ်စေ၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်စေ မိမိနှင့် မိဿဟာယဖွဲ့၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသွေးတော်အားဖြင့် ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်စေတော်မူသည်” (ကောလောသဲ၊ 1,19စာ-၂၀)။ ဧဒင်ဥယျာဉ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို ယေရှု ကုသပေးခဲ့သည်။ သူ၏ပူဇော်သကာအားဖြင့် လူ့မိသားစုသည် ဘုရားသခင်နှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်စေပါသည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ ပရောဖက်ပြုချက်များသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ယေရှုသည် “ဘုရားသခင်၏သတင်းကောင်း” ကို ဟောပြောခြင်းဖြင့် အစပြုသည်– “အချိန်စေ့ပြီ၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် နီးပြီ” ဟုပြောခဲ့သည်။ (မာကု၊ 1,14စာ-၁၅)။ ထိုနိုင်ငံတော်၏ဘုရင်ယေရှုသည် လူများကြားတွင် ကြွလာခဲ့ပြီး “ဒုစရိုက်အပြစ်အတွက် ထာဝရတည်မြဲသောယဇ်” ကိုပူဇော်ခဲ့သည်။ (ဟေဗြဲ၊ 10,12 NGÜ)။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 2000 ခန့်က ယေရှု၏ လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၊ အသက်နှင့် ဓမ္မအမှု၏ အရေးပါမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်သောအခါမှ လျှော့မတွက်သင့်ပါ။
ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခုရှိသည်– “သင်တို့သည် ယခင်က ဤလောကပုံစံအတိုင်းနေထိုင်ခဲ့ကြသော သင်တို့၏ဒုစရိုက်အပြစ်များနှင့် လွန်ကျူးမှုများတွင် သေခဲ့ကြသည်… သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ကရုဏာတော်ကြွယ်ဝပြီး ကြီးမားသောမေတ္တာတော်၌ရှိတော်မူ၏။ အပြစ်တရား၌သေလွန်သော ငါတို့ကိုပင် ချစ်တော်မူသော ခရစ်တော်နှင့်အတူ အသက်ပြန်ရှင်စေတော်မူသော ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် သင်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြပြီ။” (ဧဖက်၊ 2,1-2; ၄-၅)။
“ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ငါတို့နှင့်အတူ ထမြောက်စေ၍၊ နောင်ကာလ၌ ယေရှုခရစ်၌ ငါတို့၌ရှိသော ကရုဏာတော်အားဖြင့် အလွန်ကြွယ်ဝသော ကျေးဇူးတော်များကို ပြမည်အကြောင်း၊ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ယေရှုခရစ်၏ နောက်လိုက်များအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိအခြေအနေကို ဖော်ပြသည်။
ဖာရိရှဲတွေက ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော် ဘယ်အချိန်လာမလဲလို့ မေးတဲ့အခါ ယေရှုက “ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် စူးစမ်းလေ့လာခြင်းဖြင့် လာမည်မဟုတ်ပေ။ ဤအရပ်၌ရှိ၏ဟု ဆိုကြမည်မဟုတ်။ သို့မဟုတ်: ဟိုမှာ! အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် သင်တို့တွင်ရှိသည်” (လုကာ ၁7,20စာ-၂၁)။ သခင်ယေရှုခရစ်သည် သူ၏လူ၌ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ယခု ကျွန်ုပ်တို့၌ အသက်ရှင်တော်မူသည် (ဂလာတိ) 2,20) ကျွန်ုပ်တို့၌ယေရှုအားဖြင့်၊ သူသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏သြဇာကိုချဲ့ထွင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ ကိုယ်တော်ကြွလာခြင်းနှင့် အသက်တာသည် ယေရှု၏ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာချိန်တွင် မြေကြီးပေါ်ရှိ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ နောက်ဆုံးပေါ်ထွန်းခြင်းကို အရိပ်အယောင်ပြသည်။
ယေရှုသည် ယခု ကျွန်ုပ်တို့၌ အဘယ်ကြောင့် အသက်ရှင်သနည်း။ “အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည် ကိုယ်နှင့်မဆိုင်သော ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရကြပြီ။ အဘယ်သူမျှ ဝါကြွားခြင်းမရှိဘဲ၊ ဘုရားသခင်၏ ဆုကျေးဇူးတော်ပေတည်း။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် ထိုအရာတို့၌ ကျင်လည်ရမည်ဟု ဘုရားသခင်သည် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တော်မူသော ယေရှုခရစ်၌ ဖန်ဆင်းတော်မူသော အမှုတော်ဖြစ်၏” (ဧဖက်။ 2,8စာ-၁၀)။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကျင့်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ မရရှိနိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခု ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်နိုင်ပြီး ဘုရားသခင်ကို ဘုန်းထင်ရှားစေရန် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၌ အသက်ရှင်နေပါသည်။
ယေရှု ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက် တပည့်တော်တွေ တက်လာတာကို မြင်တဲ့အခါ ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးက “မင်းက ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ။ သင်တို့မှ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ချီဆောင်ခြင်းခံရသော ဤယေရှုသည် သင်တို့မြင်သည်အတိုင်း တဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မည်။” (တမန်တော်၊ 1,1၁)။ ဟုတ်တယ်၊ ယေရှုက တစ်ဖန်ကြွလာပြီ။
ယေရှုသည် ပထမဆုံးကြွလာချိန်တွင် မပြည့်စုံသော မေရှိယပရောဖက်ပြုချက်အချို့ကို ချန်ထားခဲ့သည်။ ယင်းသည် ဂျူးများစွာက သူ့ကို ငြင်းပယ်ရသည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရောမအုပ်စိုးမှုမှ လွတ်မြောက်စေမည့် အမျိုးသားသူရဲကောင်းတစ်ဦးအနေဖြင့် မေရှိယကို စောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် လူသားအားလုံးအတွက် အသေခံရန် မေရှိယသည် ဦးဆုံးကြွလာရမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းမှသာ သူသည် အောင်ပွဲခံသော ဘုရင်အဖြစ် အစ္စရေးနိုင်ငံကို ချီးမြှောက်ရုံသာမက၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးထက် သူ၏ ထာဝရနိုင်ငံကို တည်ထောင်ပေးမည့် အောင်ပွဲခံဘုရင်အဖြစ် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ “ဤလောက၏နိုင်ငံတို့သည် ငါတို့သခင်နှင့် သူ၏ခရစ်တော်ဖြစ်ကြပြီး၊ သူသည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် စိုးစံရလိမ့်မည်။” (ဗျာဒိတ်ကျမ်း၊ 11,15).
သခင်ယေရှုက "ငါသည် သင်တို့နေရာအရပ်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းငှာ ငါသွားသောအခါ၊ သင်တို့သည် ငါရှိရာအရပ်သို့ ရောက်မည်အကြောင်း၊ ငါသည် သင်တို့ရှိရာသို့ တဖန်လာ၍ ငါ့ထံသို့ ဆောင်သွားလိမ့်မည်" (ယော၊ ၁။4,3) နောက်ပိုင်းတွင်၊ တမန်တော်ပေါလုက အသင်းတော်ထံ ဤသို့ရေးခဲ့သည်– “ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းကင်တမန်မင်း၏အသံနှင့် ဘုရားသခင်၏တံပိုးမှုတ်သံနှင့် အမိန့်တော်ရှိ၍ ကောင်းကင်ဘုံမှ ဆင်းသက်တော်မူလိမ့်မည်” (၁ သက်. 4,16) သခင်ယေရှု ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာချိန်တွင်၊ အသေခံခဲ့သော ဖြောင့်မတ်သူများသည် ယေရှုထံ၌ ၎င်းတို့၏အသက်ကို အပ်နှံခဲ့ကြသော ယုံကြည်သူများသည် မသေနိုင်သောအဖြစ်သို့ ထမြောက်ကြမည်ဖြစ်ပြီး၊ သခင်ယေရှုကြွလာသောအခါ အသက်ရှင်ဆဲဖြစ်သော ယုံကြည်သူများသည် မသေနိုင်သောအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ လူအပေါင်းတို့သည် မိုဃ်းတိမ်၌တွေ့ခြင်းငှါ သွားကြလိမ့်မည် (း၁၆-၁၇; 1. ကောရိန္သု ၁5,51-54) ။
ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်ခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက်များသည်အငြင်းပွားမှုများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးစိတ်ပျက်စရာများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာသောအခါ“ အလွန်အမင်းအာရုံပြုခြင်း” သည် the ၀ ံဂေလိတရား၏အဓိကအာရုံစိုက်ရာနေရာမှအာရုံလွဲသွားစေနိုင်သည်။ သေခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတော်၊ ချစ်ခြင်းနှင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအနေဖြင့်ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့သောလူအားလုံးအတွက်ယေရှု၏ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရောဖက်ပြုချက်ဆိုင်ရာထင်မြင်ချက်များကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသိရှိနိုင်ပြီးကမ္ဘာ့သက်သေခံများအဖြစ်ခရစ်ယာန်များ၏တရား ၀ င်အခန်းကဏ္fulfillကိုကျွန်ုပ်တို့မဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သနားခြင်းကရုဏာနှင့်ယေရှု ဦး ဆောင်သောဘဝပုံစံကိုသရုပ်ဖော်ပြီးကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုကြေငြာသင့်သည်။
ခရစ်တော်သည် မည်သည့်အချိန်တွင် ပြန်လည်ကြွလာမည်ကို သိရန်မှာ မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာပြောထားသည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍မရပေ။ ဘာကိုအာရုံစိုက်သင့်သလဲ။ သခင်ယေရှုကြွလာသောအခါ အဆင်သင့်ဖြစ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ “ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် အသင့်စောင့်ကြလော့” ဟုယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား၊ အကြောင်းမူကား၊ လူသားသည် သင်တို့မမျှော်လင့်သောအချိန်၌ ကြွလာလိမ့်မည်။ (မဿဲ ၂4,44 NGÜ)။ “အဆုံးတိုင်အောင် တည်ကြည်သောသူသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။” (မဿဲ ၂4,13 NGÜ)။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ အာရုံမှာ ယေရှုခရစ်အပေါ် အမြဲရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ခရစ်တော်၏နောက်လိုက်များအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသည် သူ့အား လှည့်ပတ်နေသင့်သည်။ ယေရှုသည် လူသားနှင့် ဘုရားသခင်အဖြစ် ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ ကြွလာခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ကျိန်းဝပ်ခြင်းအားဖြင့် ယခုကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ယုံကြည်သူများထံသို့ ကြွလာတော်မူသည်။ ယေရှုခရစ်သည် “ဘုန်းကြီးသောကိုယ်ခန္ဓာကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ ငါတို့၏အချည်းနှီးသောကိုယ်ခန္ဓာကို ပြောင်းလဲခြင်းငှာ ဘုန်းကြီးသောအားဖြင့် တဖန်ကြွလာလိမ့်မည်” (ဖိလိပ္ပိ၊ 3,21) “ထိုအခါ ဖန်ဆင်းခြင်းကိုလည်း ဖောက်ပြန်ခြင်းနှောင်ကြိုးမှ လွတ်၍ ဘုရားသခင်၏သားတော်တို့၏ ဘုန်းအသရေတော်သို့ လွတ်စေလိမ့်မည်” (ရောမ၊ 8,21) ဟုတ်တယ်၊ ငါမကြာခင်လာမယ်၊ ငါတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကပြောတယ်။ ခရစ်တော်၏တပည့်များအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် “အာမင်၊ ဟုတ်ကဲ့၊ ကြွလာပါ သခင်ယေရှု” ဟု ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး တစ်သံတည်းဖြေကြသည်။ (ဗျာဒိတ် ၂2,20).
-Norman L. Shoaf ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်